झिंगे दाउले खत्तम बनायो::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
झिंगे दाउले खत्तम बनायो
गोर्खालीको भाकामा झिंगा मदेसिको भाकामा मक्खी भनेको फोहोर रुचाउने एक किसिमको प्राणि । यहि प्राणीको नाउँबाट नेपालमा झिंगे दाउ भन्ने चर्चित र एतिहासिक खेलको उत्पति भएको थियो । नयाँ नयाँ खेलहरु भित्रिन थाले पछी अहिले यो खेल संसारबाट डाईनासोर लुप्त भए जस्तै गरि झिंगे दाउ भन्ने खेल पनि लुप्त नै भै सकेको जस्तो छ ।
दुइ चार जना जम्मा भएर आ-आफ्नो सिक्का (पैसा) अगाडी राख्ने अनि जसको सिक्कामा पहिला आएर झिंगा बस्छ त्यो नै जितुवा हुने खेलको नाम हो झिंगे दाउ । कुनै समयमा यो नेपालको धेरै पुरानो र लोकप्रिय खेल थियो । यो खेल सहर बजार मात्र नभएर गाउ टोल सम्म प्रख्यात थियो ।
नेपालको राजनीति पनि एक किसिमको झिंगे दाउ जस्तै खेल हो । २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र भित्रे पछी सुरु भएको झिंगे दाउ खेल आजको मिति सम्म जारि नै छ । बिचको २०१७ सालमा केहि समयको लागि पूर्ण बिराम लागेको थियो यो खेलमा । मुगाली काजि नामका पूर्वका बहादुर नेपालको पंचायती राजनीतिमा हावी भए पछी जहिले पनि झिंगे दाउ जितेर झिंगे बहादुर बन्थे । मुगाली काजि साम, दाम,दण्ड र भेद चारै नीतिमा पारङ्गत थिए । २०४० साल पछी अर्को सुदूरपश्चिम का बाउ साप झिंगे दाउमा हाँक दिन आए १ पटक जिते । पछी अर्का साहुबा आए उनले पनि एक पटक जिते तर मुगाली हरुले अ.त.भनेर खेदेका झिंगे बहादुरहरुले २०४६ साल पछी हामीले पनि झिंगे दाउ खेल्न पाउनु पर्छ भनेर हाँक दिए । दाउ थापे जिते पुराना झिंगे बहादुरहरुले हारे ।
त्यो हार्नुको पछाडी पनि रोचक झेल थियो । काले बहादुर लाइ रेफ्रीमा बोलाए र रेफ्रीले भनेछन ल दुबैले सिक्का मुखमा हाल र मुख बाट झिक अनि मेरो अगाडी भुइँ मा राख । दुवै खेलाडीले त्यसै गरे । झिंगा आयो र अ.त.को पैसोमा बस्यो अनि अ.त ले जिते ! कसरी जिते भनेर खोजतलास गर्दा त अ.त लाइ पैला नै मुखा भेली हाल्न लाका रैछन । झिङ्गो गुलियो देख्ना साथ् हुरुक्कै हुने कारण त्यस्तो रैछ । पछी यहि आइडिया अपनाएर लाले हरुले झिंगे दाउ थापे झिंगा आउन त आयो तर बस्न मानेन । लालेको ९ महिने सासन त्यसैको परिणाम थियो ! पछी फेरी आर्को माहा लालेले झिंगे दाउको लागि धेरै दुख, कस्ट र हण्डर खायो । फेरी उतै का रेफ्री आए । अब झिंगे दाउ नेपालमा हैन दिल्लीमा खेलाउने भनेर सबैलाई पोको पारेर उतै लगेर खेलाए । फाइनल खेल चैँ नेपालमा गर्ने भनेर आए, खेलाए । जितेपछी अल्कापुरिमा आए जुंगामा ताउ लाउँदै बसे ।
झिंगे दाउमा जित्न नपाउने मुर्मुरिन्छन । झिंगे दाउ सुरु गराउछन कोहि हार्छन कोहि जित्छन । पहिला झिंगे दाउ सफा मनले खेल्थे र खेलकै रुपमा हेर्थे तर अहिले झिंगे दाउ खेल्ने हैन खेलाइन्छ ।
झिंगे दाउमा रेफी बसे बापत रेफ्रीले कहिले खोला लान्छन कैले सिमाना लान्छन । अहिले पनि झिंगे दाउ खेलाएर रेफ्रीले देसै खान खोजेका छन तर खेलाडीलाइ झिंगेदाउमा जितेर भन्दा पनि रेफ्रीलाइ खुसि पारेर बालुवाटारमा बस्न मात्रै रहर छ ।
झिंगे दाउको जित्न नपाएर अहिले मने कम्रेट हिस्स परेका छन । बालुवाटारमा बस्न नपाएको रन्कोले गर्दा बेसुरे बनेका छन । राजा ल्याउछु नभन । गणतन्त्र फ्याल्ने सपना नदेख । नागार्जुन दर्बार हाम्रो कृपाले पाएको होस । त्यो खोस्न नपरोस भन्दै बेसुरे राग अलाप्दै हिंडेका छन तर झिंगाको सरापले डीगां मरेको कहिले छ र ।
प्रकाशित मिति: २०७६ श्रावण ३२ गते शनिवार
ओली उभिएको संरचना नै राष्ट्रघाती छ, ओली राष्ट्रघाती हुन् या होइनन भनेर उफ्रिनुको कुनै अर्थ छैन !
नेकपाभित्र वारपारको लडाई शुरू , वामदेवको नाम उल्ट्याएर युवराजको नाम सिफारिस !
अजयबाबु शिवाकोटीमाथि ‘सुरक्षा थ्रेट’ बढेको भन्दै प्रेस युनियनद्वारा ध्यानाकर्षण
ग्याल्पो ल्होसार नेपाली संस्कृतिकै एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो: राष्ट्रपति भण्डारी